Zithini izibonelelo zokuthenga iikhomenti zeYouTube?
Phucula iiVidiyo zeZinjini zakho zokuKhangela
Ukhuthaza abanye ukuba bavakalise iVidiyo yakho
Ikhuthaza iingxoxo ukuba ziqale
Sijonga iVidiyo yakho kwaye ubhale iiNgcaciso zoMgangatho
Ungathumela iiNgxelo zakho ukuba ukhetha
Izimvo ziyaSasazwa ngaphezulu kweentsuku ezininzi
Izimvo Qala kwi24-72 Hours
Iindlela zokuthenga izimvo zikaYouTube zinokunceda isitishi sakho sidume ngakumbi
Kule mihla, iYouTube ithathwa njengenye yezona nkonzo zevidiyo zisetyenziswa kakhulu kwihlabathi. Ifumene ukukhula okubonakalayo kule minyaka idlulileyo kwaye ibe yindawo oyithandayo yokuthumela kunye nokubukela umxholo wevidiyo. Abasebenzisi abaninzi abakwaziyo ukuqokelela inani elifanelekileyo labalandeli baye bafumana izibonelelo zokwenza imali kuyo. Ke akuthandabuzeki ukuba iYouTube iza neenzuzo ezininzi. Esi sikhokelo silandelayo siya kukunceda ekwakheni isitishi esiphumeleleyo sikaYouTube kwaye ufumane izibonelelo ezininzi kulo.
Ukuze wakhe isitishi esiyimpumelelo, inyathelo lokuqala ekufuneka ulithabathe kukwakha isiseko esinamandla sabaphulaphuli. Abaphulaphuli, abaziwa njengababhalisi kuYouTube, baya kuzisa ukubonakala ngakumbi kwijelo lakho ngokuthanda iividiyo, ukuphawula kuzo, kunye nokuzithumela kubahlobo babo. Kubalulekile ukuzibandakanya nesiseko sakho sababhalisile kwaye ubamamele ukuba ufuna isitishi sakho sidume. Izimvo zibaluleke kakhulu kwimpumelelo yejelo lakho. Unga Thenga izimvo zikaYouTube ukusuka kwi-YTpals kwaye usebenzise ezi zicwangciso zilandelayo ngokubambisana ukubandakanya ababhalisi bakho kwicandelo lezimvo.
Yintoni ukubaluleka kwesicwangciso sokuphawula esisebenzayo?
I-YouTube ayisiyokubukela iividiyo kuphela, njengoko ivumela abantu ukuba banxibelelane kwicandelo lezimvo ngokunjalo. Amagqabantshintshi ayindlela entle yokuba abadali bomxholo banxibelelane nabaphulaphuli babo kwaye ngokuchaseneyo. Ivumela abaqulunqi bomxholo ukuba baphulaphule oko ababhalisi babo bathethayo malunga nomxholo. Icandelo lezimvo kwiYouTube lidlala indima enkulu ekwakheni ubudlelwane nabaphulaphuli. Iividiyo ezinamagqabantshintshi amaninzi zikholisa ukufumana iimbono ezininzi. Kufunyaniswe ukuba uninzi lweevidiyo ezinamagqabantshintshi angama-5,000 okanye ngaphezulu ziyakwazi ukufumana malunga nesigidi esi-1 sokujonga. Iimbono kunye nezimvo zivame ukuhamba kunye, njengoko ukwanda kwenye kukhokelela ekwandeni kwenye.
Xa uqala isitishi sikaYouTube, eyona njongo iphambili kukwandisa ukubonakala kwakho kwiqonga. Amagqabantshintshi angamandla okuqhubela phambili ukubonakala. Amagqabantshintshi anokuphembelela ababukeli ukuba babukele yonke ividiyo, baphinde babukele ividiyo kwaye babelane ngayo nosapho kunye nabahlobo babo. Isicwangciso esisebenzayo samagqabaza asibalulekanga nje ekufumaneni iimbono kodwa nokwalathisa ababukeli kumxholo wakho omninzi. Isicwangciso esilungileyo sokuphawula sikwakuvumela ukuba ukhulise umyalezo ofuna ukuwuthumela ngetshaneli yakho.
Izicwangciso-qhinga zokuqhuba amagqabantshintshi amaninzi kwiividiyo zakho zikaYouTube
Amagqabantshintshi anokuba luncedo kakhulu ukuba ufuna ukufumana impendulo ngqo kubabukeli bakho kwaye wenze incoko malunga neevidiyo zakho. Ngoku ukuba uyakuqonda ukubaluleka kwesicwangciso sokuphawula esisebenzayo, makhe sijonge ezinye zeendlela ezinokuthi zisetyenziswe ukuqhuba izimvo ezininzi kwiividiyo zakho. Ungasebenzisa naliphi na inani lezi ndlela ukuphuhlisa isicwangciso sakho sokuphawula. Unako kwakhona ukuthenga izimvo YouTube ukunceda kule nkqubo.
1. Buza imibuzo ekupheleni kweevidiyo.
Kuya kufuneka uhlale uzama ukubuza imibuzo ethile kubabukeli bakho ekupheleni kweevidiyo. Le mibuzo inokuba yinto evulekileyo, nangona kunjalo, imibuzo ethile ebangela ukuba ababukeli baphawule iya kuba luncedo kuwe kulo mzekelo. Ukuba eyakho yividiyo yokufundisa, unokubuza ababukeli ukuba bawafumene na amacebiso aluncedo okanye hayi. Ungaphinda uqhube uthethathethwano ngokubuza ababukeli malunga nohlobo lomxholo abafuna ukuwubona. Uya kufumana iimpendulo eziqinisekisiweyo kwicandelo lezimvo. Awuyi kufumana kuphela imibono emihle yeevidiyo ezizayo, kodwa uya kukwazi ukunxibelelana nababhalisi bakho kwinqanaba lomntu ngakumbi.
2. Yenza inkcazo yokuqala kwicandelo lamagqabaza.
Ngamanye amaxesha, eyona ndlela ingcono yokukhuthaza abalandeli bakho ukuba bathumele izimvo ezininzi kukwenza izimvo zakho kuqala. Unokukhokela kwaye uthumele izimvo ezibandakanya ababhalisile kwaye uqalise incoko malunga nevidiyo. Ngokuhamba kwexesha, ababhalisile bakho baya konwaba ngakumbi ngokunika izimvo kwiividiyo zakho. Enye indlela yokusebenzisa isicwangciso esifanayo kukucela umntu omaziyo ukuba ashiye izimvo. Esi sicwangciso sokuphawula sisebenza ngokunjalo. Izimvo ezithunyelwe ngabahlobo kunye nosapho nazo ziya kukhuthaza ababhalisile ukuba bathumele izimvo ezininzi. Ngale ndlela, uya kukwazi ukwakha uluntu olusondeleleneyo olusebenzisanayo yonke imihla.
3. Jonga umxholo osebenza kakuhle ukuqonda uthethathethwano.
Unokusebenzisa uhlalutyo lweYouTube ukubona ukuba zeziphi iividiyo ezibone eyona nto ibalulekileyo. Emva koko, unokuqinisekisa izinto ezikhokelela kunxibelelwano olukhulu. Nokuba ibibubude bevidiyo okanye uludwe oluthile lokudlalayo. Kuye kwafunyaniswa ukuba iividiyo ezimfutshane kunemizuzu emi-2 zidla ngokufumana amazinga othethathethwano ngokubanzi, xa kuthelekiswa neevidiyo zemizuzu emi-5. Nje ukuba ufumanise izinto ezenza iividiyo zakho zisebenze ngcono, ungaziphinda kwiividiyo zakho ezintsha. Oku kuya kugcina abaphulaphuli bexakekile kwaye amagqabaza aya kuhlala esiza.
4. Bamba uKhuphiswano kuYouTube.
Njengokhuphiswano lwe-Instagram kunye noFacebook, unokubamba ukhuphiswano kwiYouTube ngokunjalo, ukuqhuba ukubandakanyeka kwitshaneli yakho. Ukhuphiswano lweYouTube yindlela entle yokufumana izimvo, ababhalisile, kunye nezinto ozithandayo kwividiyo yakho, zonke ngaxeshanye. Nangona kunjalo, uya kufuna imali eyongezelelweyo kwaye kuya kufuneka wenze umgudu omkhulu wokukhuthaza ukhuphiswano. Ukhuphiswano lweYouTube yindlela entle yokutsalela ingqalelo kwisitishi sakho, nto leyo eya kubangela amagqabaza amaninzi kwiividiyo zakho ekuhambeni kwexesha. Unokukhuthaza ababukeli bakho ukuba bathumele izimvo njengenxalenye yokhuphiswano.
5. Intliziyo yezimvo zababhalisi.
Ungaqhagamshela nomrhumeli wakho kwinqanaba lomntu ngakumbi ngokuthanda izimvo abazithumelayo phantsi kweevidiyo zakho. Xa uthanda uluvo, ababukeli baya kukwazi ukubona intliziyo ebomvu kunye ne-icon encinci yesitishi sakho ecaleni kwayo. Umntu othumele uluvo naye uya kufumana isaziso sokuba izimvo zabo zithandiwe. Nje ukuba ababukeli bakubone usebenzisana nabanye kwizimvo, baya kukhuthazwa ukuba bathumele izimvo ezingakumbi. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukwakha ukunyaniseka kwabalandeli kwaye ubonise ukuba uyabaxabisa ababukeli bakho.
6. Pina amanye amagqabaza.
I-Pinning yindlela entle onokuthi uqaqambise ngayo izimvo ezithile. Iqinisekisa ukuba uluvo oluphiniweyo luphawu lokuqala ababukeli bakho abalubonayo phantsi kwevidiyo yakho njengoko beskrola phantsi kwecandelo lezimvo. Ungaphinda uqhoboshele owakho uluvo ukuqalisa incoko nababukeli okanye uqhoboshele uluvo lwababhalisi. Uphawu lokupinki lulungile ku-
Ukubuza imibuzo ethile kubaphulaphuli.
Ukunika ingcaciso malunga nevidiyo.
Ukuhlekisa abaphulaphuli ngeqanda le-easter okanye uphuhliso oluthile.
Ndibulela ababukeli ngokubukela iividiyo.
Gxininisa izimvo ezifanelekileyo ezivela kubabhalisi.
Ukuba ujonga naziphi na iitshaneli eziqhuba kakuhle kakhulu kwiYouTube, uya kufumana into enye eqhelekileyo phakathi kwazo-ukungaguquguquki. Ukuze uqhube ukubandakanyeka kwitshaneli yakho, kufuneka uhlaziye rhoqo kwaye upapashe iividiyo rhoqo. Kubalulekile ukubambelela kwishedyuli engqongqo ukuze ababukeli bazi ukuba uya kuyilayisha nini ividiyo yakho elandelayo. Nangona kunjalo, oku kuthetha ukuba kufuneka ukhuphe umxholo ngenxa yawo. Nokuba ishedyuli yakho ithumela ividiyo enye veki nganye, kubalulekile ukwenza umxholo ubandakanye abaphulaphuli. Ukuba ababukeli bafumana iividiyo zakho zinomdla kwaye zahlukile, baya kuqhubeka nokuthumela izimvo.
8. Faka i-CTA
Kubalulekile ukubandakanya umnxeba kwisenzo (CTA) kwividiyo nganye. Oku kunokubandakanywa kuyo nayiphi na inxalenye yevidiyo, nokuba kukuqala, kumbindi wesiphelo. Eyona njongo ye-CTA kukucela abantu ukuba babhalise kwitshaneli yakho. Ungasebenzisa inqaku leenkcazo kwaye ubeke ibhokisi encinci kwikona ephezulu ngasekhohlo kwesikrini, ucele ababukeli bakho ukuba babhalise kwitshaneli yakho. Xa ababukeli bebona i-CTA ngamaxesha athile, baya kukhunjuzwa ukuba babhalisele kwitshaneli yakho. Njengoko ufumana ababhalisile, izimvo kunye nezinto ezithandwayo ziya kunyuka ngokuzenzekelayo kwiividiyo zakho.
9. Sebenzisa iWidget kaYouTube kwibhlog yakho nakwiwebhusayithi
Enye indlela enkulu yokuqhuba ukuzibandakanya kwitshaneli yakho yeYouTube kukubeka iwijethi yeYouTube kwibhlog yakho okanye iwebhusayithi. Iwijethi yeYouTube iya kuba yindlela entle yokuzisa ababhalisile abatsha njengoko abalandeli bakho bebhlog kunye neendwendwe zewebhusayithi ziya kwazi malunga nejelo lakho likaYouTube. Ukuba balandela umxholo wakho kwezinye iindlela, banokuthi babhalisele ijelo lakho leYouTube. Oku kuya kubavumela ukuba bathumele izimvo kwijelo lakho likaYouTube njengoko beza kufumana ithuba lokusebenzisana nawe kumgangatho wobuqu.
10. Yakha inethiwekhi
Ukuba umrhumi uyalithanda ijelo lakho, kukho ithuba lokuba bangawathanda amanye amajelo anxulumeneyo. UYouTube uvumela abadali ukuba bongeze amanye amajelo akwaYouTube kwiphepha leengcebiso. Ngendlela efanayo, unokucela amanye amajelo anxulumeneyo ukuba abonise ijelo lakho kwiphepha leengcebiso ukuze ababukeli bawo bakhuthazeke ukuba babhalisele ijelo lakho. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukuzoba iimbono ezininzi, ababhalisile, kunye nezimvo zejelo lakho.
11. Sebenzisana nababhalisi.
Oku kubonakala njengeqhinga elicacileyo, ukuba ukuphendula kwizimvo zababhalisi bakho kuya kutsala izimvo ezininzi. Xa uphendula amagqabantshintshi ababukeli, oko kukwabonisa ukuba ubamamele kwaye unomdla kwingxelo yabo. Kuya kufuneka uthathe imizuzu embalwa yonke imihla ukuze unxibelelane nababukeli. Ngaphandle kokugqabaza kwijelo lakho, iya kuba licebo elihle ukunxibelelana nababukeli kumacandelo ezimvo amanye amajelo anxulumeneyo. Ukuba aba babukeli bafumana izimvo zakho zinomdla, baya kuzama ukuya kwiprofayile yakho ngokunjalo. Ngale ndlela, unokufumana ababhalisi abatsha.
12. Sebenzisa Amagama angundoqo ngempumelelo.
Ukusebenzisa amagama angundoqo kwividiyo ngokufanelekileyo kubaluleke kakhulu ukuba ufuna ukuqhuba ukubandakanyeka okufanelekileyo kwisitishi sakho seYouTube. Amagama angundoqo asetyenziswa xa umntu efuna into ethile. Ukuba usebenzisa amagama angundoqo afanelekileyo, amathuba okuba iividiyo zakho zifike kumbukeli ofanelekileyo uyenyuka. Kufunyenwe ukuba ngaphezulu kwe-60% yababhalisi abatsha kwisitishi bahlala bevela kukhetho lokukhangela lweYouTube. Ukuba awuwasebenzisi amagama angundoqo afanelekileyo okanye amagama akho angundoqo asasazekile, iividiyo zakho zinokungabonakali kwiziphumo zokukhangela. Kubalulekile ukuba uchaze njengoko kunokwenzeka xa udala iithegi zamagama angundoqo. Unokusebenzisa izixhobo ze-intanethi ukufumana iingcebiso zamagama angundoqo.
13. Ukukhuthazwa kweSitishi.
Kubalulekile ukukhuthaza isitishi sakho kungekuphela kuYouTube kodwa nangaphandle kwayo. Oku kuya kuvula isitishi sakho sikaYouTube kubabukeli abavela kwiindlela ezahlukeneyo. Njengoko beqala ukulandela umxholo wakho wevidiyo, baya kuqala ukuphawula, ukwabelana, kunye nokuthanda iividiyo zakho. Okulandelayo zezinye zeendlela onokuthengisa ngazo isitishi sakho sikaYouTube -
Nxulumanisa isitishi sakho sikaYouTube kumaphepha eendaba zentlalo.
Ngenisa isitishi sikaYouTube kwiiwebhusayithi zokuphawula iincwadi zentlalo.
Yongeza isitishi kwiinjini zokukhangela ividiyo.
Qhoboshela ikhonkco kwitshaneli yakho kaYouTube kuluhlu lokuposa.
Sebenzisa i-URL yakho yeYouTube xa uthumela izimvo kwiiblogi kunye nokunye.
14. Sebenzisa i-thumbnails enomdla kumxholo wakho wevidiyo
Ukuba ufuna ukutsala ababhalisile abatsha kubalulekile ukuba izithonjana zakho zigqame. Abantu banokucofa ngakumbi kwividiyo yakho ukuba bafumana i-thumbnail inika umdla. Nangona kunjalo, oku akuthethi ukuba uqala ukusebenzisa imifanekiso yokucofa njenge-thumbnail yakho. Akunakwenzeka ukuba ababukeli balandele isitishi sakho ukuba usebenzisa iqhinga lokucofa. Eyona njongo iphambili yokubandakanya i-thumbnail enomdla kukwandisa iimbono ozifumanayo. Ukuba uyakwazi ukunika ababukeli umxholo olungileyo, iimbono ziya kuzisa izimvo kunye nezinto ezithandwayo.
15. Sebenzisa inqaku elitsha lokuhluza izimvo zakho
Into entsha kwi-YouTube Studio (idesktop) ikuvumela ukuba ucofe izimvo kwijelo lakho. Ungasebenzisa oku ukukhangela amagqabantshintshi athile kwaye ucokise uphendlo, olusekwe kwi- -
Ubume belungu letshaneli.
Ungasebenzisa kwakhona icebo lokucoca ukujonga amagqabantshintshi anemibuzo ethile ukuze ukwazi ukuyiphendula ngokulula. Ngaphandle koku, ungasebenzisa eli nqaku ukuphonononga izimvo onazo okanye ongaphendulanga kuzo.
Okokugqibela, ungathenga izimvo zikaYouTube kwiYTpals. Ukuthenga izimvo zeYouTube kunokuba lukhetho olukhulu kwabo basanda kuqalisa uhambo lwabo lweYouTube, njengoko abanye ababukeli banokuthandabuza ekuqaleni ukuthumela izimvo kwiividiyo ezingenazo izimvo. Olu lukhetho oluhle lweeakhawunti ezisele zisekiwe ngokunjalo, njengoko usebenzisa ezi zicwangciso zikhankanywe ngasentla kwaye uthenge amagqabantshintshi eYouTube ukukunceda kwinkqubo.
Kutheni kufuneka uthenge amagqabantshintshi kaYouTube?
Ngoku ukuba uqhelene nezicwangciso zokunyusa inani lezimvo kwijelo lakho, lixesha lokujonga ukubaluleka kokuthenga izimvo zeYouTube. Kukho ukhuphiswano olukhulu kwihlabathi leendaba zosasazo namhlanje, kwaye kuye kwaba nzima ukufumana ukuthandwa ngamajelo eendaba ezentlalo afana neYouTube. Oku kungenxa yokuba uninzi lwabantu abadumileyo abaziwayo baguqukela kumaqonga afana neYouTube ukwenza umxholo. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuphucula izicwangciso kwaye ujonge iindlela ezintsha zokuqhuba ukuzibandakanya kubalandeli.
Ukuba u Thenga izimvo zikaYouTube kubaboneleli benkonzo abafana neeYTpals, uya kuba nakho ukonyusa impumelelo yetshaneli yakho. Makhe sijonge ezinye zezibonelelo zokuthenga izimvo zeYouTube.
1. Yandisa ukuqondwa kweevidiyo zakho.
Unokufumana izibonelelo ezahlukeneyo zeYouTube kuphela emva kokuba befumene ukuqondwa okuthile kubabukeli. Xa uthenga izimvo zikaYouTube, amathuba okuba ividiyo yakho yaziwe ayanda. Ukuba ufuna ukuphumelela kwiYouTube, iividiyo zakho kufuneka zifumane ababhalisile aboneleyo, izinto ozithandayo kunye nezimvo. Ukuthenga izimvo kwenza umsebenzi ube lula, njengoko izimvo ezininzi zikwaqhuba iimbono ezininzi kunye nokuthandwa. Nangona iividiyo zakho zisenokungafumani umlinganiselo ofanayo wezimvo ezifunyanwa ngabantu abadumileyo beYouTube, ukuthenga izimvo zeYouTube ngokuqinisekileyo kwandisa ukuqondwa kwejelo lakho emehlweni ababukeli.
2. Nyusa umgangatho wejelo lakho likaYouTube
Kwi-YouTube, umgangatho wamajelo udla ngokumiselwa linani lababhalisi ijelo elinalo. Umrhumi unokwahluka ngokuxhomekeke kwinani lezimvo kunye nezinto azithandayo kwividiyo nganye. Kungenxa yoko le nto ukwanda kwenani lokuthandwa kunye nezimvo kukhokelela ekunyukeni okulinganayo kwinqanaba lesiteshi kwiYouTube. Oku kubonisa inyani yokuba amagqabantshintshi abaluleke kakhulu kwimpumelelo yetshaneli likaYouTube. Xa uthenga izimvo zeYouTube, unokunyusa umgangatho wejelo lakho ngokwandisa amathuba okufumana ababhalisile abaninzi.
3. Yenza iividiyo zakho zibe yintsholongwane
Wonke u-YouTuber ufuna ukuba umxholo wabo uhambe ngentsholongwane, nangona kunjalo, akukho fomula imiselweyo yokufezekisa oko. Ukwenza umxholo wentsholongwane, umdali kuya kufuneka atyale ixesha elininzi kwaye ayikhuthaze kwiindlela ezahlukeneyo zokudala i-buzz ejikeleze ividiyo. Nangona kungekho ndlela iqinisekileyo yomlilo yokufumana intsholongwane, ukuthenga izimvo zeYouTube ngokuqinisekileyo kunokuncedisa kwinkqubo. Nje ukuba uthenge izimvo zeYouTube, ividiyo yakho iya kuphawulwa kubantu abaninzi. Njengoko besanda abantu becofa iividiyo zakho, izimvo ezininzi ziya kuhlala zingena. Icandelo lezimvo yinto yokuqala abajonga ngayo ababukeli, nangaphambi kokuba babhalise kwitshaneli. Ke ukuba necandelo lamagqabantshintshi ngokuthenga izimvo kuya kukunceda ekutsaleni ababukeli abaninzi.
4. Fumana ucofa ngakumbi kunye nokuthandwa
Ukuba ufuna ukuba isitishi sakho sidume kwiYouTube, kubalulekile ukuba sifumane ucofa ngakumbi, izimvo, kunye nezinto ezithandwayo. Inkqubo yokwenza abantu bajonge iividiyo zakho inokuba yinde kwaye idinwe. Nangona kunjalo, kukho iindlela onokuthi wenze ngayo inkqubo. Enye yeendlela ezilungileyo zokuqalisa ukuthandwa kwakho kukuthenga izimvo zikaYouTube. Nje ukuba uthenge amagqabantshintshi kwiYouTube, iimbono kunye nezinto ezithandwayo ziya kuthululelwa ngokuzenzekelayo njengoko abantu abaninzi beqala ukucofa ividiyo yakho. Oku kungenxa yokuba inani elilungileyo lamagqabaza kwiividiyo zakho kwandisa amathuba okuba avele kwiziphumo zokukhangela.
5. Ukutsala ababhalisi abatsha
Inxalenye ebaluleke kakhulu yeYouTube ngababukeli kunye nababhalisi. Zonke izicwangciso zakho ekugqibeleni zijolise ekutsaleni ababukeli abaninzi kwijelo lakho. Yinyani eyaziwayo ukuba inani elikhulu lababukeli kunye nababhalisile onayo kwijelo lakho, kokukhona uya kukwazi ukutsala ababukeli abaninzi. Inani lezimvo kwiividiyo zakho likwamisela inani leembono oza kugqiba ukuba nazo. Ukuthenga izimvo kwi-YTpals kunokunceda kule nkqubo kwaye kunokwenza umsebenzi wakho ube lula. Uya kuba nakho ukutsala ababhalisile abatsha njengoko ababukeli abandwendwela ijelo lakho beqaphela inani lezimvo osele unazo kwijelo lakho.
6. Unceda ekudaleni ubungqina bentlalontle
Ubungqina boluntu bubaluleke kakhulu kwihlabathi leendaba zoluntu. Yinyaniso eyaziwayo ukuba abantu badla ngokuwahoya amajelo anesimo esithile ekuhlaleni. Xa inani elilungileyo lababukeli liwuthemba lo mbono okanye umbono wejelo lakho likaYouTube lisasaza, ababukeli abatsha baya kuzigalela ngokuzenzekelayo. Ngenxa yobungqina bentlalontle, aba babukeli batsha banokuthambekela ngakumbi ekwandiseni inkxaso yabo kwijelo. Ungathenga izimvo zikaYouTube ukwenza ubungqina bentlalo kwindawo. Nje ukuba ababukeli babone izimvo kwiividiyo zakho, baya kuba nomdla wokujonga ngakumbi umxholo wakho.
7. Zikhuphe ngaphandle izimvo ezingakhiyo
Ngamaxesha amaninzi, abantu banokuphela bethumela amagqabantshintshi amaninzi angalunganga kunye nentiyo kwiividiyo zeYouTube ezingadibaniyo nomxholo. Abantu abaninzi basebenzisa iYouTube ukukhuthaza ubutshaba kunye nocalucalulo. Kulapho ukuthenga izimvo zeYouTube kuya kunceda. Ungazixela ezi zimvo, nangona kunjalo, unokusebenzisa elinye iqhinga lokuvala ingxolo. Xa uthenga amagqabantshintshi eYouTube, unokuqinisekisa ukuba izimvo ezilungileyo ziyasibekela ezi zimvo zingalunganga, ezinokugqibela zenzakalise iividiyo zakho ekuhambeni kwexesha. Esi sisicwangciso esihle sokugcina i-Internet trolls kwaye abayi kukwazi ukufumana ulwaneliseko kwizimvo ezinentiyo.
8. Yenza amandla eqongeni
Xa uthenga izimvo zikaYouTube, ividiyo yakho iya kuqala ukufumana ukuqondwa eqongeni. Njengoko abantu abaninzi beqala ukubukela iividiyo zakho, iya kukuvumela ukuba ukhulise indawo yakho esikhaleni. Inani elikhulu leemboniselo lithetha ukuthanda okuninzi, izimvo ezingakumbi, kunye nababhalisi abaninzi. Kwaye ngababhalisi abaninzi kunye nezimvo kwiividiyo zakho, ababukeli abongezelelweyo baya kukhuthazwa ukuba babhalise kumxholo wakho kwaye bathumele izimvo. Lo mjikelo uya kuqhubeka kwaye uya kukwazi ukufikelela kwiindawo eziphakamileyo ngokukhawuleza. Ngenxa yoko, uya kukwazi ukusebenzisa amandla athile eqongeni. Awuyi kukwazi ukufumana izibonelelo zokwenza imali kuphela kuYouTube, kodwa amandla aya kukunceda ekwakheni ubambiswano olutsha kunye nokujonga iindlela ezongezelelweyo.
9. Ukudala ukukhula ngokulinganayo kwezimvo neembono
Ukuba uthenge iimbono zeYouTube kwiYTpals kwixesha elidlulileyo, kuya kuba sengqiqweni ukuthenga izimvo zeYouTube. Xa abantu bejonga isitishi sakho, abanye babo banokushiya izimvo. Ayibonakali kakuhle kwijelo lakho ukuba umlinganiselo phakathi kwezimvo kunye nezimvo ucinywe ngumda omkhulu. Ungayilungisa le meko ngokuthenga izimvo zeYouTube ezihambelana nenani leembono onazo kwividiyo yakho. Njengoko iimbono zakho kunye nezimvo zibonakala ziyinyani, abantu baya kukhuthazwa ukuba balandele isitishi sakho kwaye bashiye izimvo kunye nezinto abazithandayo kwiividiyo.
10. Fumana i-traffic eninzi kwiwebhusayithi yakho yobuqu
Ungasebenzisa impumelelo yesitishi sakho sikaYouTube ukuqhuba itrafikhi kwiwebhusayithi yakho. Xa uthenga amagqabantshintshi eYouTube kumthombo othembekileyo onje ngeYTpals, unikwe ukuba uya kuba nakho ukufumana ukuthandwa, ukujonga kunye nababhalisile. Njengoko isiseko sakho sobhaliso sikhula, ungasebenzisa impembelelo yakho kwisiza ukukhuthaza ukugcwala kwiwebhusayithi yakho. Isitishi sakho sikaYouTube siyakuvumela ukuba ujolise kubantu abanomdla kuhlobo lomxholo owuvelisayo.
Ukusuka kwezi zicwangciso zikhankanywe ngasentla zokuqhuba izimvo kwiividiyo zakho zikaYouTube, kuyabonakala ukuba zibaluleke kangakanani izimvo kwindawo yeYouTube. Ukuba umtsha eqongeni kwaye uyazabalaza ukuziqingqela i-niche, ngoko unokuxhamla kwinkonzo yeNgcaciso ye-YouTube ye-YTpals. Xa uthenga izimvo zikaYouTube kumthombo othembekileyo onje ngeYTpals, uya kuba nakho ukufumana zonke ezi zibonelelo zikhankanywe ngasentla. I-YTpals iphonononga ividiyo yakho kwaye ibhale iinkcazo ezikumgangatho ophezulu. Ukwanalo nokhetho lokuthumela izimvo zakho. Inkonzo iya kuqalisa phakathi kweeyure ezingama-24-72 zokubeka iodolo, kwaye izimvo ziya kusasazwa kwiintsuku ezininzi.
Amagqabantshintshi e-YouTube ongezwe kwinqwelo yakho.